iTunesGo FREE License version LIMITED TIME ~ Mobile Knowledge
iTunesGo FREE License version LIMITED TIME
Posted on 5:21:00 PM by Ko Ye
"TunesGo" ဆိုတဲ့ Desktop Application လေးက Apple ရဲ့ iDevics တွေကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိပ်ဆက်ပြီး Songs, Videos, Photos အစရှိသည်တို့ကို သွင်းယူတဲ့အခါမှာ iTunes ထက်ပိုမို လွယ်ကူစွာ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားရမယ့် application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
"iTunesGo" PC နှင့် ချိပ်ဆက်လိုက်တာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် iDevice ထဲမှာရှိနေတဲ့ song, photo, video, TV show, podcast, voice memo နှင့် audiobook အားလုံးကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သင့်စိတ်ကြိုက် PC ထဲသို့ ကူးထည့်ခြင်း၊ PC ထဲကနေ ကူးထည့်ခြင်းတို့ကို လွပ်လပ်စွာ 'Drag and Drop' ပုံစံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
မိမိ PC ရှိသီချင်း၊ ရုပ်ရှင်များ ကူးထည့်ရာတွင် မည်သည့် format ပင်ဖြစ်နေစေ 'iTuneGo' က ပြောင်းလဲ convert လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
'iTunesGo' ရဲ့ "Smart Export" feature ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ Library ကြီးတစ်ခုလုံးကို export လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် (computer ထဲတွင် မရှိသေးသော file များသာ)။
Playlist စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ်များကို စိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်နိုင်းခြင်း၊ file များကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ iTunes တွင် လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းများကို 'iTuneGo' က အားလုံး အဆင်ပြေအောင် တာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
'iTuneGo' ကို "Wondershare" က PC/Mac နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး $49.95 နဲ့ ရောင်းချလျှက်ရှိပါတယ်...
** iTuneGo ကို Officially FREE ရရှိမည့် မဟာအခွင့်အရေး **
'iTuneGo' ကို Registered version အဖြစ် တရားဝင် ရယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလင့်ခ် လေးမှာ အမည်၊ email address မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘေးနားရှိ "Download" ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါပြီ။
Software Activate လုပ်ရမည့် Registration Code ကိုတော့ ဖြည့်စွက်ခဲ့တဲ့ email address ကို ပြန်လည်ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ် (အကယ်၍ inbox မှာ မတွေ့ခဲ့ပါက Spam folder ထဲတွင်ရှာပါ)။
အစီအစဉ်ပြီးဆုံးရန် ယနေ့မှ စတင်၍ နောက်ထပ် ၅ ရက်သာ(18.05.2014) ကျန်တော့သည့် အတွက် ဒီအခွင့်အရေးကို ရရှိမှာ ဖြစ်လို့ ဤဆောင်းပါးလေးကို မိတ်ဆွေများထံ လက်လှမ်းမီသလောက် ဝေမျှရင်း အမြန်ဆုံးသာ ရယူလိုက်ကြပါ...
>> GoGo iTunesGo FREE
mail က ချက်ချင်းပြန်ပို့ပါတယ်
credit - www.moethagyarr.info
အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..Facebook Page လေးကိုတော့ LIKE ပေးသွားပါဗျာ..လိုအပ်တာတွေကိုလည်း C-box မှာ မှာကြားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Download လုပ်နည်း။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ဖိုင် share ပါက www.koye9992.blogspot.com ဆိုပြီး credit ပေးပါရန်
Posted in Apple Tool | No comments